About • Toe Tet
Toe Tet Essential
ကျွန်တော် Dr. ဖြိုးပိုင်ပါ။ ToeTet ရဲ့ Founder ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ စွန့်ဦးတီထွင်နဲ့ Business & Marketing Trainer & Consultant တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် Academic Education 100% ကို MBA ရသည်အထိ မြန်မာပြည်မှာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းတဖက်နဲ့ ဂိုက်သင် အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပြီး၊ လစဉ်သောကြာနေ့တိုင်း မူဆယ်သွား၊ တရုတ်နယ်စပ်မြို့ ရွှေလီမှာ Online Courses တွေကို သွား download လုပ်ပြီး ပြန်လည်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ရုံးမှာအလုပ်လုပ်တုန်းကလဲ အင်တာနက်မြန်တဲ့ ရုံးကို ၇ နာရီအရောက်သွားပြီး Online Courses တွေတက်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တာ Online Course တွေပါ။
ဒါပေမယ့် ပညာရပ်တစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါ ဥပမာနဲ့ စာသင်တဲ့နေရာမှာ ကာလဒေသပေါ်လိုက်ပြီးသင်ပေးနိုင်မှု အလွန်အရေးပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့လို local Trainer တွေနဲ့ Expert တွေကို စုစည်းပြီး ကာလ ဒေသနဲ့ကိုက်ပြီး မြန်မာလိုရှင်းပြနိုင်သည့် Online Course တွေကို တစ်ခါအပ်ပြီး အမြဲတမ်းတက်ရောက်နိုင်အောင် စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။
Anytime, you decide when it's better for you.​
At home or from any other place, it's up to you!
Beginner, intermediate or advanced. We have the course you're looking for.
ပြသနာက တချို့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် နိုင်ငံတကာ courses တွေက local နဲ့မကိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် local နဲ့ကိုက်ညီမည့် video courses တွေကို နေရာမရွေး အချိန်မရွေးမှ သင်ယူလို့ရအောင် YEC Online Learning လေးကို စတင်ဖြစ်ပါတယ်။